अष्ट्रेलिया छोडेर नेपालमा क्रिकेट खेल्न आउलान् सुनम? दिए यस्तो प्रतिक्रिया
By क्रिकेट पाटी	 On May 4, 2021
काठमाडौं- केही दिनअघि मात्र अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका नेपाली क्रिकेटर सुनम गौतम ब्रिसबेन प्रिमियर लिग (बीपीएल) लागि छनोट भए ।
उनलाई अक्सनमार्फत बेसाइड पाइरेट्सले अनुबन्ध गरेको हो । उनी ५० हजार अष्ट्रेलियन डलर अर्थात् ४६ लाख रुपैयाँमा टिममा आबद्ध भएका हुन् ।
लिगको पहिलो संस्करण आगामी अगस्टमा हुने बताइएको छ । लिगमा अलराउन्डर गौतम आबद्ध पाइरेट्ससँगै ८ टिम सहभागी हुँदैछन् ।
जसमा बेसाइड पाइरेट्स, कोस्टल मार्लिन्स, डार्लिङ डिन्गोज, गोलकोस्ट वेभराइडर्स, मोरेटोन म्याजिक, नर्दन किंग्स, साउदर्न रकेट्स र वेस्टर्न पावर रहेका छन् ।
महँगो मूल्यमा बीपीएलमा अनुबन्ध भएपछि नेपाली क्रिकेट समथर्कमाझ उनको चर्चा झन् चुलिएको छ । धेरैले त उनलाई नेपाली राष्ट्रिय टिमका लागि पनि बोलाउनुपर्ने माग पनि राखिरहेका छन् ।
सुनमको सोच चाहिँ केछ त? यो प्रश्नको जवाफमा उनले नेपालले अहिले राम्रो क्रिकेट खेलिरहेकाले टिमलाई आफ्नो आवश्यकता नपर्ने बताएका छन् ।
सुनमले समर्थकले आफूलाई नेपालका लागि खेल्न म्यासेज गर्ने गरे पनि तत्काल नेपाल फर्किन नसकिने आशय व्यक्त गरे ।
‘मलाई म्यासेज आउँछ । नेपाल टिमका खेल्ने चाहना त छ । तर, मेरो चाहनाले मात्र हुँदैन । सिस्टमको कुरा छ । मैले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ,’ एक युट्युब च्यानसँगको कुराकानीमा सुनमले भनेका छन्, ‘नेपालमा युवा खेलाडीले पनि राम्रो खेलिरहेका छन् । त्रिकोणात्मक सिरिज हेर्दा लागेको छ अब उनीहरूले मलाई बोलाउनु नपरोस् ।’
उनले विगतमा टिमले खराब खेलेको बेला ‘मलाई पनि बोलाइदियो हुन्थ्यो’ चाहिँ लाग्ने गरेको बताए ।
‘खराब खेलेको बेला मलाई पनि नेपालमा खेल्नका लागि बोलाइदियो हुन्थ्यो लाग्थ्यो । तर, अब टिम पनि राम्रो बनेको छ । मैले नेपालका लागि खेल्नु नखेल्नु छुट्टै कुरा हो । बरु देशले चाहिँ जित्नुपर्छ,’ सुनमले भने, ‘नेपाली क्रिकेटले प्रगति गरेको देख्दा गर्व महसुस हुन्छ । नेपालले निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेकाले पनि अहिले टिमलाई मेरो जरुरत पनि छैन ।’
सुनमले नेपालका लागि खेल्नु छाडेर अष्ट्रेलिया उडेको भनेर केही व्यक्तिले टिप्पणी गरेको देख्दा दुःख लाग्ने गरेकोसमेत बताए ।
‘म नेपालमा नभएकोमा कति समर्थकले दुःख मान्नुहुन्छ । तर स्वीकार गर्नुपर्छ । मेरो पनि कति बाध्यता हुन्छ । रहरले म पनि अष्ट्रेलिया आएको होइन,’ सुनमले भने, ‘इमानदारिताका साथ भन्छु रहरले म यहाँ बसिरहेको छैन, बाध्यताले नै हो । कतिपयले अष्ट्रेलियामा क्रिकेट खेलेको भनेर टिप्पणी गर्दा दुःख त लाग्छ । तर, सबै यो बाध्यता हो ।’
नेपालको उमेर समूहका प्रतियोगिता खेलिसकेका अलराउन्डर गौतम अष्ट्रेलियाको घरेलु क्रिकेट खेल्ने गर्छन् ।
उनी सन् २०१९ मा क्रिकेट भिक्टोरियाको ‘टिम अफ दि सिजन’ मा पर्न सफल भएका थिए । उनले सो सिजन ग्रिनभेल कंगारुज क्लबबाट खेलेका थिए ।
सिजन २०१८-१९ मा उनले क्लबका लागि एक शतकसहित जम्मा ६४४ रन बनाएका थिए भने ३८ विकेट हात पारेका थिए।
उनी सन् २०१२ अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। त्यसपछि पढाइका साथै उनले अस्ट्रेलियाको घरेलु क्रिकेट खेल्न थालेका थिए ।
अष्ट्रेलिया जानुअघि उनले सन् २००५ मा नेपालको यू-१७ र सन् २००७ मा नेपालको यू-१९ टिमबाट खेलेका थिए ।
अष्ट्रेलिया पुगे पनि उनी नेपालको घरेलु क्रिकेट खेल्न फर्कने गरेका छन् । उनले केही वर्षअघि एभरेष्ट प्रिमियर लिग खेलेका थिए ।
बीपीएलब्रिसबेन प्रिमियर लिगसुनम गौतम